मुहार फेर्दै भक्तपुर अस्पताल « Lokpath
२०७७, २३ पुष बिहीवार ०८:५५
प्रकाशित मिति : २०७७, २३ पुष बिहीवार ०८:५५
भादगाउँ । स्थापनाको एक शताब्दी बितिसक्दा पनि सेवा दृष्टिले अत्यन्त पछाडि परेको भक्तपुर अस्पतालले बितेको एक वर्षमा काँचुली फेरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बेला उत्कृष्ट सेवा दिन सफल यो अस्पताल वाग्मती प्रदेशको उत्कृष्ट अस्पताल मात्र बन्न सफल भएन स्वास्थ्य मन्त्रालयको मूल्याङ्कनमा समेत उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा अस्पतालको सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने टोलीले अस्पतालको स्थलगत अध्ययन गरी दिएको अङ्कको आधारमा भक्तपुर अस्पतालले उत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेको हो । उक्त मूल्याङ्कन टोलीले भक्तपुर अस्पतालले न्यूनतम सेवा मापदण्डमा दु्रत गतिमा प्रगति गर्दै सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याएको पुष्टि गरेको हो । अस्पतालको स्थलगत अवलोकन र मूल्याङ्कनमा भक्तपुर अस्पतालले ८२ अङ्क प्राप्त गरी उत्कृष्ट नतिजा निकालेको वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा अर्जुन सापकोटाले बताए । गत वर्ष यस्तै मूल्याङ्कनमा भक्तपुर अस्पतालले आफ्नो खराब अवस्थाका कारण ३८ अङ्कमा चित्त बुझाउनु परेको थियो ।
भक्तपुर अस्पताल कुनै बेला रिफरल अस्पतालको रूपमा परिचित थियो । यहाँको सेवाप्रति जनताको विश्वास हट्दै गएको थियो । उपचारका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो । दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक पाउन मुस्किल थियो । एक्स–रे, ल्याबलगायतको सेवा नियमित थिएन तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । अस्पतालले बितेको एक वर्षमा गरेको एकपछि अर्को सुधारका कार्यक्रमले अस्पतालको साख बढ्न थालेको छ । अस्पतालप्रति स्थानीयवासीको विश्वास बढ्न थालेको छ ।
प्रदेशस्तरीय भक्तपुर अस्पतालमा हाल १०२ शैया छन् । तीमध्ये १० शैया इमर्जेन्सी सेवामा छ भने बाँकी ९२ शैयामध्ये कोरोना स्ङ्क्रमितका लागि २०, प्रसूति सेवाका लागि २५, मेडिकल वार्डमा २१, सर्जिकल वार्डमा २० र आइसियुमा छ शैया छन् । त्यस्तै यस अस्पतालमा तीन वटा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा रहेको छ ।
केही महिनापछि हाइकेयर युनिट (एचसियु)को रूपमा ७५ शय्या सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सुमित्रा गौतमले जानकारी दिइन् । “एचसियुका लागि आवश्यक सामग्रीको लागि बोलपत्र आह्वान गरी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ”, उनले भनिन् ।
भक्तपुर अस्पतालले एक वर्षमा एक हजार ६६२ वटा शल्यक्रिया गर्न सफल भएको मेसु गौतमले बताइन् । “पहिलाजस्तै अलिकति क्रिटिकल भयो कि रिफर गर्ने सिस्टम पूर्णरूपमा बन्द गरिसक्यौँ । हामीसँग भएको इक्विपमेन्टले भ्याएसम्म सबै शल्यक्रिया यही गरिरहेका छौँ । एक÷दुई वटा हामीले गर्न नसकेको मात्र रिफर गरी पठाएका छौँ ।”
अस्पतालको सेवाले गति लिए पनि दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अझै पाउन नसकेको मेसु गौमतले गुनासो गरिन् । दरबन्दीअनुसार नेपाल सरकारका १२९ जना स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालमा हुनुपर्ने भए पनि हाल ५५ जना मात्र उपलब्ध भएको उनले बताइन् । “सरकारको दरबन्दीअनुसार अस्पतालमा १२९ हुनुपर्नेमा जम्मा नेपाल सरकारबाट ५५ जना उपलब्ध छन् । बाँकी सबै व्यवस्थापन समिति, नेपाल सरकारको करार र विभिन्न कार्यक्रममार्फत पूर्ति गरिरहेका छौँ”, उनले भनिन् ।
अस्पतालमा हाल १४५ स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कार्यरत छन । तीमध्ये नर्स र अनमी ४२, पारामेडिक आठ, पिसीआरसहित ल्याबमा १२, रेडियोग्राफर चार, विकास समितिका ५२, लेखा, प्रशासन, स्टोरमा एक एक जना, स्वास्थ्य बीमाका चार जना कार्यरत छन् ।
भक्तपुर अस्पतालमा हालै ल्याप्रोस्कोपी सर्जरीसमेत शुरु भएको छ । छिट्टै पार्किन्सोनिजम (बिर्सिने रोग)को उपचार थाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको मेसु गौतमले बताइन् । साथै आँखाको शल्यक्रिया गर्ने सेवा विस्तार गर्न तिलगङ्गा अस्पतालमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “अपाङ्गता भएका बच्चा नजन्मियोस् भन्ने परीक्षण गर्ने र सानासाना नानीका लागि छ शैयाको आइसियु सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ अस्पताल परिवार अगाडि बढेको छ ।”
अस्पतालले २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा, स्त्री रोग, प्रसूति सेवा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । “शल्यक्रिया, बालरोग, दन्तरोग, छाला रोग, मानसिक रोग, फिजियो थेरापी, आँखा तथा चस्मा जाँच, स्वास्थ्य बीमा सेवा, अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ”, मेसु गौतमले भनिन् ।
त्यसैगरी लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा पुरुषका लागि अस्पतालमा सञ्चालित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएर कुनै पनि हिंसामा परेकालाई स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा एवं कानूनी सेवासमेत दिने व्यवस्था गरेको मेसु डा गौतमले जानकारी दिइन् । अस्पतालले पाठेघरको निःशुल्क शल्यक्रिया तथा निःशुल्क प्रसूति सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
अस्पतालले पेइङ क्लिनिक सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । अस्पतालको ओपिडी (बहिरङ्ग) सेवा सकिएपछि दिउँसो ३ बजेदेखि र बिहान ९ बजे अगाडि पेइङ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । साथै खुट्टा, छाती, पेटलगायत विशेष अङ्गको भिडियो एक्सरे सेवा र दूरबिन प्रविधिबाट शल्यक्रिया सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी डा सुनिल ढुङ्गेलले अस्पतालमा अहिले सहकार्य र टिम वर्कको विकास भएकाले सुधार आएको बताए । उनले भने, “पहिला अस्पतालमा टिम वर्क हिसाबले काम गरौँ भन्दा मनमुटाव हुने अनेकौँ समस्या आउँथ्यो तर त्यो सबै हराए । सबै जना मिलेर काम गरेकाले अहिले काम गर्ने वातावरण एकदमै उत्साहजनक देखिएको छ ।”
कोरोनाले जुटाएको अवसर
विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसले हरेक क्षेत्रलाई असर गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने अवसर पनि जुटाइदिएको छ । यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण भक्तपुर अस्पताल पनि बनेको छ । अस्पतालले कोरोना महामारीका बीच नै भेन्टिलेटरसहितको आइसियु सञ्चालनमा ल्यायो । कोरोनाको जोखिमका कारण अन्य अस्पतालले नियमित सेवा बन्द गरेको अवस्थामा भक्तपुर अस्पतालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै सबै सेवालाई नियमित सञ्चालन गर्यो । यसले सरकारी अस्पताल जनताको अस्पताल हो भन्ने सन्देश दिन सफल भएको अस्पतालका अर्का चिकित्सक डा दीपक भण्डारीले बताए । उनले भने, “पहिला आइसियु सञ्चालन गर्न नसकेको अस्पतालमा कोभिडको बेला आइसियु सञ्चालन गरेर सबै सेवा यही उपलब्ध गरायौँ । अरुबेला रिफर गर्नुपर्ने केसहरु कुनै पनि रिफर गर्नु परेन । यसले गर्दा जनताको विश्वास जित्न सफल भयौँ ।”
भक्तपुर अस्पतालले स्थापनाको ११६ वर्षपछि गत आश्विन पहिलो सातादेखि आइसियु सञ्चालनमा ल्याएको हो । सरकारले कोरोना ‘हब’ अस्पताल बनाएपछि भक्तपुर अस्पतालले वर्षौंदेखि थन्किएका सामान र आइसियुका भेन्टिलेटरसहितका उपकरण र वाग्मती प्रदेश सरकारले पठाएको सामग्रीबाट पाँच वटा भेन्टिलेटर र छ शय्याको आइसियु सञ्चालनमा ल्याएको छ, तीमध्ये तीन वटा भेन्टिलेटरसहित चार शय्या कोरोना सङ्क्रमितका लागि छुट्याइएको छ ।
मेसु गौतमले भनिन्, “अस्पताललाई आइसियु अतिआवश्यक भइसकेको थियो । अस्पतालको सिङ्गो समूह मिलेर आइसियु ब्लक निर्माणदेखि अन्य सबै तयारी पूरा गरी करारमा नयाँ जनशक्ति थप गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्यायौं ।” अस्पतालले सरसफाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार गरेको छ । कुनै बेला दुर्गन्धले भरिपूर्ण हुने यस अस्पतालमा अहिले फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । अस्पतालले बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गरेको छ । प्लाष्टिक र कागजजन्य फोहोरको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।
अस्पतालको स्थापना राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा विसं १९६१ असार १७ गते ‘चन्द्रलोक डिस्पेन्सरी’का नामबाट भएको हो । विसं २०२८ मा ५० शैयाको जिल्लास्तरीय अस्पतालको रूपमा सेवा विस्तार हुँदै २०६१ भदौमा २५ शैयाको प्रसूतिगृह थप गरी ७५ शैया सञ्चालनमा आएको थियो ।
सडकका विषयमा विवाद चर्किएपछि कुटपिट, वडाध्यक्ष गम्भीर घाइते
सिमकोट । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षमाथि हातपात हुँदा उनी सख्त घाइते भएका
फेसबुकबाट किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान !
काठमाडाैं । ललितपुर प्रहरीले अनलाइन मार्फत् विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने भनि ठगी गर्नेलाई
नेविसंघका नेता शुभराम बस्नेतसहितलाई अदालतले दियो सफाइ
काठमाडौँ– नेविसंघका नेता शुभराम बस्नेतलगायतविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुले सफाइ दिएको
मनाङ– जिल्लाका जङ्गलमा लागेको डढेलो अझै पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। नासो गाउँपालिकास्थित
घुम्ने शौखमा बेचिदिए घर, स्कूल बसलाई बनाए घर !
राज्यमन्त्रीबाट हटाइएका दुगड प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त
सोमवार जन्म हुने व्यक्ति कस्ता हुन्छन् ? अद्भूत गुण र…
शवलाई किन छिटै जलाईन्छ ? यस्तो छ रहस्य
स्पेनिस सुपर कपको उपाधि भिडन्त : उत्रिएलान् त